चर्चको मिसन, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
मानव रणनीतिहरू सीमित मानवीय समझ र व्यक्तिले निर्धारण गर्न सक्ने उत्तम मूल्या assess्कनमा आधारित छन्। अर्कोतर्फ, परमेश्वरको रणनीति, हाम्रो जीवनमा उनको प्रतिष्ठा आधारभूत र अन्तिम वास्तविकता को बिल्कुल सही समझ मा आधारित छ। यो वास्तवमा इसाईमतको महिमा हो: चीजहरू वास्तवमै अगाडि ल्याइन्छन्। संसारका सबै रोगहरूको इसाई निदान, राष्ट्रहरू बीचको द्वन्द्वदेखि लिएर मानव आत्माको तनावसम्म, किनभने यो मानव अवस्थाको सही समझ प्रतिबिम्बित गर्दछ।
NT का अक्षरहरू सँधै सत्यको साथ सुरू हुन्छ, हामी यसलाई "सिद्धान्त" भन्छौं। एनटी लेखकहरूले हामीलाई सधैं वास्तविकतामा फिर्ता बोलाउँदछन्। जब सत्यको यो आधार बनाइन्छ, तिनीहरू व्यावहारिक अनुप्रयोगको सints्केतमा जान्छन्। यो सत्य भन्दा बाहेक केहि संग शुरू गर्न कत्ति मूर्ख छ।
एफिसीहरूलाई लेखेको पत्रको पहिलो अध्यायमा, पावलले चर्चको उद्देश्यको बारेमा धेरै स्पष्ट बयान दिए। यो केवल अनन्त कालको उद्देश्यका बारे मात्र होईन, केहि धमिलो भविष्यको कल्पना, तर उद्देश्य यहाँ र अहिलेको लागि।
उद्देश्य # १: चर्चले परमेश्वरको पवित्रता झल्काउनु पर्छ
"किनभने उहाँमा, संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि, उहाँले हामीलाई उहाँको अनुहारको अगाडि पवित्र र निर्दोष तरिकामा खडा हुन रोज्नुभएको थियो।" (एफिसी २:१:1)। यहाँ हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौं कि चर्च केवल परमेश्वरद्वारा गरिएको सोच मात्र होइन। यो संसारको निर्माण हुनुभन्दा धेरै अघि नै योजना बनाइएको थियो।
चर्चमा भगवानले चासो राख्नु भएको पहिलो कुरा के हो? उसले चासो लिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको चर्चले के गर्दैन, तर चर्च के हो। हुनु अघि कार्य गर्नु पर्छ, किनकि हामी के गर्छौं भनेर हामी के गर्छौं निर्धारण गर्दछ। परमेश्वरका जनहरूको नैतिक चरित्र बुझ्नको लागि चर्चको प्रकृति बुझ्नु आवश्यक छ। येशूभक्तहरूको हैसियतमा हामी येशू ख्रीष्टको शुद्ध चरित्र र पवित्रता झल्काएर संसारका नैतिक उदाहरणहरू हुनुपर्दछ।
यो स्पष्ट छ कि एक वास्तविक इसाई, यो एक आर्कबिशप वा एक साधारण ल्यापरसन हो, आफ्नो जीवन, बोल्ने, कार्य गर्ने र प्रतिक्रिया गर्ने तरिका मार्फत स्पष्ट र विश्वस्त भई आफ्नो ईसाई धर्मको चित्रण गर्नुपर्दछ। हामी इसाईहरूलाई परमेश्वरसामु "पवित्र र दण्डहीन" खडा हुन बोलाइएको छ। हामीले उहाँको पवित्रता झल्काउनु पर्छ, जुन चर्चको उद्देश्य पनि हो।
उद्देश्य # २: चर्चले परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नुपर्दछ
एफिसीहरूलाई लेखेको पत्रको पहिलो अध्यायमा पावलले चर्चको लागि अर्को उद्देश्य दिन्छ - He (उनले) येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीलाई उनका पुत्रहरू हुन प्रेम गरे जुन उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसा गर्न उहाँको इच्छाको असल इच्छाको लागि भविष्यवाणी गरिएको थियो » (पद)) «हामीले सुरुदेखि नै ख्रीष्टमा आशा राखेका हामीले उहाँको महिमाको प्रशंसा गर्न सेवा गर्नुपर्दछ» (पद १ 12)
त्यो याद गर्नुहोस्! वाक्य: Christ हामीले सुरुदेखि नै येशूमा आशा राखेका छौं। हामीलाई ख्रीष्टियनहरू भनेर जनाउँछ जो उहाँको महिमाको प्रशंसाको लागि बाँच्ने भाग्यमा छन्। चर्चको पहिलो काम भनेको मानिसहरुको हित होइन। कल्याण निश्चय पनि परमेश्वरलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तर यो चर्चको पहिलो काम होइन। बरु, हामीलाई उहाँको महिमाको प्रशंसा गर्न परमेश्वरले चुन्नुभएको छ कि उहाँको महिमा हाम्रो जीवनमा संसारमा प्रकट भएको छ। "सबैका लागि आशा" व्यक्त गरेझैं: "अब हामीले हाम्रो जीवनको साथ परमेश्वरको महिमा सबैले देख्नु पर्छ।"
परमेश्वरको महिमा के हो? यो परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्छ, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकटीकरण। यस संसारमा समस्या भनेको परमेश्वर लाई नजान्नु हो। उनी उहाँलाई कुनै बुझेनन्। उनको सबै खोज र भering्गमा, सत्य पत्ता लगाउन खोजमा, उनी भगवानलाई चिन्निन। तर परमेश्वरको महिमाले परमेश्वर वास्तवमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेर संसारलाई देखाउन प्रकट गर्नुपर्दछ। जब चर्चले परमेश्वर र परमेश्वरको प्रकृतिका कामहरू देखाउँदछ, उहाँ महिमित हुनुहुनेछ। पावलले २ कोरिन्थी:: described मा वर्णन गरे अनुसार:
किनभने भगवान जसले आदेश दिनुभयो: "उज्यालो अँध्यारोबाट चम्कन्छ!" जो पनि हाम्रो हृदयमा ज्योति ख्रीष्टको अनुहार परमेश्वरको महिमा को ज्ञान चम्कोस् बाहिर चम्कोस् भएको छ।
मानिसहरूले येशूको महिमा र उहाँको चरित्रमा परमेश्वरको महिमा देख्न सक्दछन्। र यो महिमा, पावलले भनेजस्तै, "हाम्रो हृदयमा" पनि पाइन्छ। ख्रीष्टको अनुहारमा फेला पार्न सकिने उहाँको चरित्रको महिमालाई परमेश्वरले संसारलाई बताउन चर्चलाई आह्वान गर्नुभयो। यसलाई एफिसी १, २२-२1 मा पनि उल्लेख गरिएको छ: «हो, ऊसँग सबै छ (येशू) उनको खुट्टामा र उहाँलाई उहाँको शरीर भनेर चर्च को सर्वोच्च टाउको बनाए, सबै मा सबै पूरा गर्नेहरूको पूर्णता। त्यो एक विशाल बयान हो! यहाँ पावलले येशू भनेर छ कि सबै भन्छन् (यसको पूर्णता) उनको शरीरमा देख्न सकिन्छ र त्यो चर्च हो! चर्चको रहस्य यो हो कि ख्रीष्ट यसमा बस्नुहुन्छ र संसारको लागि चर्चको सन्देश यो प्रचार गर्नु र येशूको बारेमा कुरा गर्नु हो। एफिसी २: १ -2 -२२ मा फेरि चर्चको बारेमा सत्यको रहस्यलाई पावलले बयान गरे
यसैले, तपाईं अब अपरिचित र कैदीहरू हुनुहुन्न, तर परमेश्वरका सन्तहरू र परमेश्वरका स companions्गीहरूसँग पूर्ण नागरिक हुनुहुन्छ, जुन प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमा निर्मित छन्, जसका साथ ख्रीष्ट येशू आफै आधारशिला हुनुहुन्छ। उहाँमा हरेक संरचना, एकसाथ जोडिएर, प्रभुको पवित्र मन्दिरमा बढ्दै जान्छ, र यसैमा तपाईं पनि आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान बनाउनु भएको छ।
यहाँ चर्चको पवित्र रहस्य छ, यो परमेश्वरको बासस्थान हो। ऊ आफ्नो मान्छे मा बस्छ। यो अदृश्य ख्रीष्टलाई देख्नको लागि चर्चको ठूलो बोलावट हो। एफिसी 3: -9 -१० मा पावलले आफ्नै सेवकाईलाई एक इसाई नमूनाको रूपमा वर्णन गरे: «र सबै चीजहरूका सृष्टिकर्ता, परमेश्वरमा प्रागैतिहासिक कालदेखि झुकाइएको रहस्यको प्राप्तिको बारेमा सबै ज्ञान दिन, त्यसोभए स्वर्गमा भएका शक्ति र शक्तिहरू अब चर्चको माध्यमबाट परमेश्वरको विविध ज्ञानमा सजग गराउन सकिन्छ।
स्पष्ट रूपमा। चर्चको काम भनेको "भगवानको बहु-बुद्धिको ज्ञान प्रकट हुनेछ।" ती मानिसहरुकालागि मात्र होइन तर चर्चहरुमा हेर्ने स्वर्गदूतहरु लाई पनि चिनाउँछन्। यी "आकाशमा शक्ति र शक्तिहरू" हुन्। मानिसहरू बाहेक त्यहाँ अरू जीवहरू पनि छन् जसले चर्चको देखभाल गर्छन् र यसबाट पाठ सिक्छन्।
निस्सन्देह माथिका पदहरूले एउटा कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ: चर्चलाई बोलाउनु भनेको हामीमा बास गर्ने ख्रीष्टको चरित्रलाई शब्दमा बयान गर्नु हो र यसलाई हाम्रो मनोवृत्ति र व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नु हो। हामीले जीवित ख्रीष्टसँग जीवन परिवर्तन गर्ने मुठभेडको वास्तविकता घोषणा गर्नुपर्दछ र निःस्वार्थ प्रेमले भरिएको जीवन मार्फत यस परिवर्तनको चित्रण गर्नुपर्दछ। जब सम्म हामी यो गर्दैनौं, हामी केहि पनि गर्दैनौं भने भगवानका लागि प्रभावकारी हुनेछ। यो एफिसी 4: १ मा लेख्दा पावलले बोलेको यो चर्चको पेशा हो: "त्यसोभए म तपाईंलाई चेताउनी दिन्छु ... तपाईलाई दिइएको पेशाप्रति मर्यादासाथ हिंड्नुहोस्।"
याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू आफैले यस आह्वानलाई प्रेषितको chapter अध्यायको सुरूको अध्यायमा पुष्टि गर्नुभयो। आफ्नो बुबा जानुभन्दा ठीक अघि येशू आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ: “पवित्र आत्मा तिमीमा आउँदा तिमी शक्ति पाउनेछौ, र यरूशलेम, सारा यहूदिया र सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ। । »
उद्देश्य #:: चर्च ख्रीष्टको गवाही हुनुपर्दछ।
चर्चको बोलावट साक्षी हुनुपर्दछ, र गवाही ती हुन् जसले व्याख्या गर्छन् र स्पष्टसँग प्रस्तुत गर्दछन्। प्रेरित पत्रुसको पहिलो पत्रमा चर्चलाई साक्षी दिने बारेमा एउटा अचम्मको शब्द छ: "तपाईं, अर्कोतर्फ, छानिएको जाति, शाही पुजारीको दल, पवित्र समुदाय, सम्पत्तीका लागि छानिएका मानिसहरू र तपाईंमा सद्गुण हुनुपर्दछ। जसले तपाईंलाई अन्धकारबाट उहाँको अद्भुत ज्योतिमा बोलाउँदछन् (गौरवका कामहरू) घोषणा गर्नुहोस्। » (१ पत्रुस २,))
कृपया संरचना "तपाईं हुनुहुन्छ ..... र तपाइँले हुनु पर्छ।" नोट गर्नुहोस्। यो हाम्रो ईसाईको रूपमा प्राथमिक काम हो। येशू ख्रीष्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ ताकि हामी एउटाको जीवन र चरित्रलाई स्पष्टसँग चित्रित गर्न सक्दछौं। यस आह्वानलाई चर्चसँग बाँड्नु प्रत्येक इसाईको जिम्मेवारी हो। सबैलाई बोलाइन्छ, सबै परमेश्वरको आत्माले बसोबास गर्छन्, सबैले संसारमा बोलावट पूरा गर्ने आशा गरिन्छ। एफिसीहरूलाई लेखेको पत्रमा यो सुन्न सकिन्छ। चर्चका साक्षीहरू कहिलेकाँही समूहको रूपमा पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ, तर गवाही दिने जिम्मेवारी व्यक्तिगत हो। यो मेरो र उनीहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो।
तर त्यसपछि अर्को समस्या प्रकाशमा आउँदछ: सम्भव झूटा इसाईमतको समस्या। चर्च र व्यक्तिगत इसाईहरूले पनि ख्रीष्टको चरित्रको बारेमा बोल्न र एउटाले ठूलो दाबी गर्छन् भन्ने कुरा सजिलो छ। इसाईहरूलाई चिनेका धेरै गैर-इसाईहरूलाई अनुभवबाट थाहा हुन्छ कि इसाईहरूले दिने छवि येशू ख्रीष्टको साँचो बाइबलीय छविसँग मिल्दैन। यसैकारण, प्रेरित पावलले यस साँचो ख्रीष्टको जस्तो चरित्रलाई होशियारीसाथ छानिएका शब्दहरूमा वर्णन गरे: all सबै नम्रता र नम्रताका साथ धैर्यतासाथ एक-अर्कालाई प्रेममा सहन, र शान्तिको बन्धनमार्फत आत्माको एकता कायम राख्न उत्सुक। । » (एफिसी,, २ -))
नम्रता, धैर्यता, प्रेम, एकता र शान्ति येशूको वास्तविक विशेषताहरू हुन्। इसाईहरू साक्षी हुनुपर्दछ, तर अह ar्कारी र घोर हुनु हुँदैन, "तपाईं भन्दा पवित्र" मनोवृत्तिसहित होइन, कपटी अनुमानमा होइन र निश्चय पनि इसाईहरू विरुद्ध इसाईहरूको खिलाफ खडा भएको फोहर चर्चको तर्कमा होइन। चर्चले आफैंमा कुरा गर्नु हुँदैन। उनी नम्र हुनुपर्छ, उनको शक्तिमा जोड दिनुहुन्न वा बढी प्रतिष्ठा खोज्नुहुन्न। चर्चले संसारलाई बचाउन सक्दैन, तर चर्चका प्रभुले सक्नुहुन्छ। इसाईहरूले चर्चको लागि काम गर्नु हुँदैन वा तिनीहरूको जीवनशैली तिनीहरूको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर चर्चको प्रभुको लागि।
चर्चले आफूलाई हुर्काउने अवस्थामा प्रभुलाई समात्न सक्दैन। साँचो चर्चले संसारको आँखामा शक्तिको खोजी गर्दैन किनकि यसमा बसोबास गर्ने प्रभुबाट चाहिएको सम्पूर्ण शक्ति यसमा पहिले नै छ।
चर्चले धैर्यता र क्षमाशील हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जान्दछ कि सत्यको बीउ फहराउन, बढ्नको लागि र फल फलाउन समय लिन्छ। चर्चले लामो समयदेखि स्थापित ढाँचामा अचानक परिवर्तन ल्याउन चर्चले माग गर्नुहुन्न। बरु, चर्चले नराम्रो कामबाट अलग रहन, न्यायको अभ्यास गर्ने र सत्यको बीउ फैलाएर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको उदाहरण दिनुपर्दछ जसले समाजमा जरा हाल्छ र अन्ततः परिवर्तनको फल दिन्छ।
वास्तविक इसाईमतको उल्लेखनीय प्रतीक
आफ्नो पुस्तक "डेक्लिन एण्ड फल अफ द रोमन एम्पायर" मा, इतिहासकार एडवर्ड गिब्नले रोमको पतनलाई आक्रमण गर्ने शत्रुहरूलाई नभई आन्तरिक क्षयलाई श्रेय दिए। यस पुस्तकमा त्यहाँ एक खण्ड छ जुन सर विन्स्टन चर्चिलले कण्ठ पारे किनकि उसलाई यो उपयुक्त र निर्देशनमूलक लाग्यो। यो खण्डले खस्किने साम्राज्यमा चर्चको भूमिकाको बारेमा छलफल गर्‍यो।
Big ठूलो कुराको दौरान (रोमन साम्राज्य) लाई खुला हिंसाले आक्रमण ग attacked्यो र बिस्तारै क्षीण हुँदै गयो, एक शुद्ध र नम्र धर्मले मानिसहरुको दिमागमा कोमलताले घुस्यो, मौन र नम्रतामा हुर्के, प्रतिरोधको माध्यमबाट उत्साहित भयो र अन्तमा क्रसको ब्यानर उठायो क्यापिटलको भग्नावशेष। एक इसाईमा येशू ख्रीष्टको जीवनको सबैभन्दा प्रख्यात संकेत पाठ्यक्रम प्रेम हो। प्रेम छ कि अरूलाई तिनीहरू स्वीकार गर्छन्। दयालु र क्षमाशील छ कि प्रेम। माया जसले गलतफहमी, विभाजन र टुक्रिएको सम्बन्धहरू निको पार्छ। येशूले यूहन्ना १ 13::35। मा भन्नुभयो: "यसले सबैलाई भन्दछ कि यदि तपाईं एकअर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईं मेरा चेलाहरू हुनुहुन्छ।" यो प्रेम प्रतिद्वन्द्वी, लोभ, घमण्ड, अधीरता वा पूर्वाग्रहको माध्यमबाट कहिल्यै व्यक्त हुँदैन। यो दुरुपयोग, निन्दा, बाधा र विभाजनको विपरित हो।
यहाँ हामी एकताबद्ध शक्ति पत्ता लगाउँदछौं जसले मण्डलीलाई संसारमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम गर्दछ: ख्रीष्टको प्रेम। हामी कसरी परमेश्वरको पवित्रता झल्काउँछौं? हाम्रो प्रेम मार्फत! हामी कसरी परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्न सक्छौं? हाम्रो प्रेम मार्फत! येशू ख्रीष्टको वास्तविकतालाई हामी कसरी गवाही दिन्छौं? हाम्रो प्रेम मार्फत!
राजनीतिमा भाग लिने, “पारिवारिक मूल्यमान्यताहरूको रक्षा”, शान्ति र न्यायको प्रवर्धन गर्ने, वा अश्‍लील कुराको विरोध गर्ने वा यस वा त्यस उत्पीडित समूहको अधिकारको रक्षा गर्नेबारे एनटीले थोरै मात्र बताएको छ। म भन्दै छैन कि मसीहीहरूले यी मामिलाहरूको ख्याल गर्नु हुँदैन। स्पष्ट रूपमा, तपाईंसँग त्यस्तो हृदय हुनुहुन्न जुन व्यक्तिमा मायाले भरिएको छ र त्यस्ता चीजहरूको चिन्ता लिन सक्दैन। तर एन.टी. यी कुराहरुको तुलनामा थोरै भन्छ किनभने भगवानलाई थाहा छ कि यी समस्याहरू समाधान गर्ने र टुक्रिएको सम्बन्धलाई निको पार्ने एउटै मात्र तरिका मानिसहरुको जीवनमा एक नयाँ नयाँ गतिशील - येशू ख्रीष्टको जीवनको गतिशील परिचय दिएर हो।
यो येशू ख्रीष्टको जीवन हो जुन पुरुष र महिलालाई साँच्चै चाहिन्छ। अँध्यारो हटाउने काम प्रकाशको थालनीबाट शुरू हुन्छ। प्रेमको परिचयबाट नै घृणा हटाउने काम सुरु हुन्छ। रोग र भ्रष्टता हटाउने जीवन को परिचय को साथ शुरू हुन्छ। हामीले ख्रीष्टको परिचय दिन सुरु गर्नुपर्नेछ किनकि हाम्रो बोलावट भनेको हामीलाई बोलाइएको हो।
सुसमाचार हाम्रो जस्तो सामाजिक वातावरणमा अंकुरण भयो: यो अन्याय, जातीय विभाजन, बलात्कार अपराध, अनैतिकता, आर्थिक अनिश्चितता र व्यापक भयको समय थियो। प्रारम्भिक चर्चले कठोर र हत्याराको सतावटको अन्तर्गत बचावको लागि लडे जुन हामी आज कल्पना गर्न सक्दैनौं। तर शुरुको चर्चले अन्याय र उत्पीडनको बिरूद्ध लड्न वा यसको "अधिकार" लागू गर्नको पेशा देखेन। प्रारम्भिक चर्चले परमेश्वरको पवित्रता झल्काउने, परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्ने, र येशू ख्रीष्टको वास्तविकतालाई प्रमाणित गर्ने आफ्नो जनादेश देख्यो। र उनले आफ्नै मानिसहरूलाई र बाहिरी व्यक्तिहरूको लागि असीम प्रेमको ज्वलन्त प्रदर्शनको माध्यमबाट यो काम गरिन्।
मगको बाहिरी भाग
हड्ताललाई समर्थन गर्न धर्मशास्त्र खोज्ने जोसुकैले विरोध, बहिष्कार र अन्य सामाजिक कार्यहरूलाई सामाजिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न निराश हुनेछन्। येशूले यसलाई बोलाउनुभएको थियो: "बाहिर धुनु"। एक साँचो इसाई क्रान्तिले भित्रबाट मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्दछ। यसले कपको भित्री भाग खाली गर्दछ। यसले पोष्टरमा कुञ्जी शब्दहरू परिवर्तन गर्दैन जुन व्यक्तिले बोक्दछ। यसले व्यक्तिको हृदय परिवर्तन गर्दछ।